दिपिका र दिवाकरको एउटै बोली, ‘प्रकाश दाइ मान्छेको आँसु लाग्छ है’ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २६, २०७७ समय: १२:२७:२४
इटहरी/ पछिल्लो समय पत्रकार र अभिनेत्री बिचको लफडाले चरम रुप लिरहेको छ । पत्रकार प्रकाश सुवेदीले नाम नतोकी दारा निस्केको अनुहार, महानायिका बनाईदिनु पर्ने जस्ता कुराहरू गरेपछि सो कुराले सिधै अभिनेत्री पुजा शर्मालाई बिझायो । नबिझाओस पनि कसरी ? घुमाउरो शैलिमा शर्मालाई नै झटारो हानेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । जस्ले यतिबेला उग्र रुप लिसकेको छ ।
यहाँ सम्मकी पुजाले सुवेदी बिरुद्ध कलाकार संघमा उजुरु समेत हालेकी छन् । शारीरिक बनावटलाई लिएर तुच्छ शब्दहरु टेलिभिजनको कार्यक्रम बोलेपछी कलाकार हरुपनी सुवेदीको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । जिल्ला र प्रदेशको संख्या नजान्दा पुजा केही समय अगाडि एक्लिएपनी यो पटक भने उनलाई सबैको साथ मिलेको छ ।
उनको पक्षमा नायिका ऋचा शर्मा, केकि अधिकारी, निर्माता तथा कलाकार रबिन्द्र शिह बानिया, दिपक राज गिरि, मनोज गजुरेल लगायतले बोलिसकेका छन् । यस्तै अभिनेत्री दिपिका प्रसाईं र उनकी श्रीमान दिवाकर भट्टराई पनि पुजा को पक्ष लिदै बोलेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा दिवाकरले एक स्ट्याटस लेखेका छन जस्लाई दिपिकाले पनि शेयर गरेकी छन् । हेर्नुस् सो स्ट्याटस जस्ताको त्यस्तै :
प्रकाश दाइ एउटा कुरा सत्य हो मान्छेको आँसु लाग्छ है ।सम्झनुस त यसरी भित्र भित्रै कति रोए होलान ?तपाइको 30 बर्षको अनुभवमा ! हिजो जस्तो छैन दाइ आज को रजतपट हिजो कलाकार /नाइका बन्नको तपाईंहरु जस्तो senior (journalist /producer /director / distributor) आदिको पछि लाग्नु पर्थ्यो पिडा भए पनि एक्लै रुनु पर्थ्यो तर आजको नारी हरु तेस्तो अबस्थामा छैनन यो 5बर्षमा धेरै परिवर्तन भैसक्यो आज हामी चलचित्र कर्मी राम्रो मान्छे को पछि लाग्नु पर्छ, request गर्न पर्छ, convince गर्न पर्छ फिल्म खेल्नको लागि तेसैले give respect&love so you be respected. अब तपाईं हरु ले ego आवेग भन्दा पनि मार्गदर्शक बन्न पर्छ दाइ नया पुस्तालाई राम्रो संस्कार दिन पर्छ दाइ ।